Saaxiibbadii ay soohdimaha kala qeybiyeen ee kulmay 30 sano kadib - BBC News Somali
Image caption Agha Ahmed Raza, Amar Kapur and Rishad Haider waxa ay ku wada koreen magaalada Lahore, Pakistan
Toddobaatan sano ka hor, bishii Agoosto 1947-dii , dowladda Britain ayaa soo afjartay gumeysigii ay ku haysay Hindiya, waxaana halkaasi ku kala qeybsamay hal dal, waxaana ka dhashay Hindiya oo ay u badanyihiin dadka hunuudda ah iyo Pakistan oo u badanyihiin dadka Islaamka ah.
Balse dhulka oo kaliya ma ahan waxa la kala qeybiyey, waxaa sidoo kale la kala qeybiyey, lana kala go'doomiyey dad aad isu jeclaa oo saaxiibo ah sida lagu soo bandhigey madxaf cusub oo ah kii ugu horeeyey oo lagu kaydinayo taariikhda waddamada la kala gooyay adduunka.
Hindiya oo sheegtay inay mintidiin ku dishay Kashmir
Ninka lagu magacaabo Sautik Biswas ayaa uruuriyey taariikhda 4 saaxiibbo oo ku kala lumay kala go'ii labada dal.
"Dalkeenii waa la kala gooyay, shanqartii quruxda badnayd ee wadnaha Hindiya waa la burburiyey", ayuu warqad ku qorey nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Lahore ee Pakistan sannadkii 1949-kii.
Warqadda waxaa qorey Asaf Khwaja oo u qorey Amar Kapur oo ku sugnaa magaalada Delhi.
Wax allaale wixii qalbigiisa ku jirey ee wanaag ah ayuu warqada ku qorey.
"Waxaan joognaa Lahore, saaxiibadaa iyo dadkii aad isla ciyaari jirteen, iyo kuwii aad kuleejka isla dhigan jirteen waxa ay halkan kuugu qirayaan in kala qeybinta soohdinta aysan marnaba kala goyn doonin xiriirkeena jacaylka iyo raxmadda ku dhisan, waan ku xusuusanaa, waxaanan kugu xusuusanaa jacaylkii walaaltinimo" ayuu qorey Asaf oo markaasi ku biirey wargeyska Pakistan Times isaga oo saxafi ah.
Afar tan saaxiibada ah waxa ay kala ahaayeen Amar Kapur, Asaf Khwaja, Agha Raza iyo Rishad Haider, sidii walaalo oo kale ayayna isu jeclaayeen.
Waxa ay ku noolaayeen hal xaafad, guryaha ayay isku booqan jireen, waxyaabaha dariiqyada lagu gado ayay wada iibsan jireen, hal iskuul ayay wada dhigteen, waxayna wada ciyaari jireen cricket -ka.
Balse kala go'a waxa uu saamaynta ugu badan ku yeeshey Amar oo isaga kaligiis ahaa Hindu, waxayna u guureen magaalada Dalhi iyaga oo ka guurey gurigoodii magaalada Lahore ee dalka Pakistan. Waxa ay xitaa ka guureen ganacsigoodii ahaa madbacad 57 sano shaqaynaysay.
Lahaanshaha sawirka Courtesy Omar Khwaja
Image caption Asaf Khwaja waxa uu ahaa saxafi ka hawlgala wargayska Pakistan Times.
Lahaanshaha sawirka Partition Museum
Image caption Dhambaaladii Amar Kapur
Amar markii ay Delhi u guureen waxa uu kaydsaday buug xusuus qor ah oo ku qorey wax kasta oo ku saabsanaa saaxiibadiis iyo waliba waddadii dheereyd ee ay soo mareen.
Muddo 30 sano ayay kala maqnaayeen saaxiibadan aadka isu jeclaa, oo ay kala geeyeen duruufaha . waa wax aad u adag in la xajiyo saaxiibtinimo ka dhaxaysa dad ku kala sugan labo dal oo cadawtooyo badan isu haya, manaba kusii jirto in xitaa aysan heli karin wax fiiso ah oo ay isku booqan karaan.
Balse ugu dambeyntii nasiibka ayaa isu keeney afartii saaxiib.
Xagaagii 1980-kii ayaa nin adeer u ah Agha Raza waxa uu Delhi u yimid in uu ka qeybgalo shir, Agha ayaa adeerkiis usoo faray fariin ah bal in uu raadiyo Amar, isaga oo u tilmaamay in qoyska Amar ay Dehli ku leeyihiin madbacad uu magaceedu yahay Kapur.
Agha waxa uu ahaa nin karti badan, waxa uu ka shaqeeyey shirkad shidaal, waxa uu ku biirey ciidamada badda, sidoo kale waxa uu u shaqeeyey wasaaradda shaqada, isaga oo afartan sano gaarin ayuu ku noqdey gobolkiisa si uu wax oga qabto beer ay qoyskooda lahaayeen.
Hadda waxa uu galay in uu raadiyo saaxiibkiisii xili hore ay kala lumen.
Image caption Amar Kapur waxa uu usoo guurey Dalhi, bil uun kadib markii kala qeybinta dhacday
Waxaa suurtogashay in saaxiibadii dib u wada xiriiraan, is wacaan, taleefoonana isu diraan.
Rishad Haider waxa uu noqdey ganacsade caan ah oo xagga bangiyada ah, Agha beertiisii ayuu iska falanayay, halka Asaf uu kasii shaqaynayay wargayska Pakistan Times, isaga oo markii dambe noqdey madaxa wakaaladda wararka Pakistan, xilkaasi oo uu iska casilay kadib markii ay isku dhaceen hoggaamiyihii militariga Pakistan Jeneraal Zia Ul-Haq.
Amar waxa uu isaga ka shaqaynayay ganacsigii qoyskooda ee macaashka badan samaynayay ee ka furnaa Delhi iyo Agra.
Intii ay wada xiriiriyeen waxa ay aad oga sheekeysteen farxadooda, murugtooda, guurkooda, caruurtooda, iyo qaraabadooda.
Markii Amar uu lumiyey guri uu ku lahaa xaafad dadka taajiriinta degaan ee Delhi kadib muran dhex maray isaga iyo walaalkiis, Agha ayaa warqad usoo qorey Amar oo ku yiri " Aad ayaan uga muraaro dilaacay , kana murugooday in aad gadday gurigaaga, waxaan dareemey in guri aniga aan leeyahay oo kale la gaday, balse yaa og waxaaba laga yaabaa in wax fiican ay kuu noqoto". Adeerkiis oo Delhi ku sugan ayaa diiwaanka taleefoonada ka raadiyay magaca reer Kapur, wuuna ku guuleystay, kadibna Pakistan ayuu kusoo laabtay isaga oo wada ciwaanka iyo taleefoonka Amar.
Image caption Amar Kapur waxa uu haystaa kayd xusuustii saaxiibadiis.
Image caption Agha Raza iyo xaaskiisa ayaa Amar Kapur ku booqdey Delhi muddo kadib markii labada dal kala go'een.
Image caption Warqadihii badnaa ee Amar Kapur loo qori jirey
Amar ayaa Pakistan ku laabtay bishii Janaayo sannadii 1982-dii si uu uga qeybgalo arooska wiilka Agha ee Qaasim kadib markii uu heley fiiso.
Halkaasi ayay markii ugu horeysey muddo 30 kadib ah ku kulmeen afartii saaxiibbo ee soohdimaha kala qaareen.
Inkasta oo uu Amar marar badan Agha ku casuumey in uu Delhi kusoo booqdo, ayaa waxaa dhacday in sannadkii 1988-dii uu Agha balan qaaday in uu Amar booqan doono sanadka cusub, balse markii la marayay bishii Diseember ayuu taagnida ka dhacay Agha kadibna dhintey, isaga oo markaasi jirey 69 sanno.
Rishad ayaa xigay oo isna dhintey sannadkii 1993-dii, isaga oo 67 jir ah.
Warqad uu Asaf qorey bishii June 1996-dii ayuu ku yiri " waa arrin aad murugo u leh in aan waayay saaxiibbo wehel ii ahaa nolosheyda oo dhan, waxay iila mid tahay in ay dhimatay qeyb jirkayga ka mid ah. Agha Axmed iyo Rashid labaduba waa ay dhinteen, waxayna iiga tageen meel maran oo nolosheyda ka mid ah, meeshaasi oo aanan waligeed la buuxin karin, aniga lafteyda ma caafimaad qabin baryahan, mana foga xiliga aan ka dabo tagi doono".
Image caption Amar Kapur sawirkan waxa uu ka qaaday xaaskiisa Minna ka hor intii aysan is guursanin 1955-tii.
Waxa uu intaasi ku daray in haddii labadooda ay kulmi waayaan, in caruurahooda ay kulmaan.
Bil ka dib marka uu warqadan u qorayo Amar ayuu Asaf isna dhintey kadib markii wadnaha laga qabtay. Wuxuu jirey 71 sanno.
Amar kaliya ayaa ka haray saaxiibbadii walaalaha ahaa, waa 94 jir, ganacsigiisii wuxuu iska iibiyey 20 sanno ka hor, waxa uu la noolyahay xaaskiisa Mina, isaga oo ku nool magaalada Faridabad oo ku taala duleedka Delhi.
Waxa uu waqtiga ku lumiyaa sawirro farshaxan ah, kaydka sawirro xusuustii saaxiibbadiis iyo noloshiisii kale.
Mar la weeydiiyey saaxiibadiis ayuu yiri "Waan tabay, waan jeclahay, waanan jeclaan doonaa".
Sawiradan waxaa noosoo gudbiyey Mansi Thapliyal. Sawirada kaydka ah waxaan ka helney xubnaha qoyska. Waraysiga waxaa lagu qaaday Delhi iyo qadka taleefoonka ee magaalooyinka Karachi, Lahore, Ismabad iyo California.